Iidoli zoSondo eziPhakathi zithengisa ngamaxabiso aphantsi
Eyona Doll iphakathi yaPhambili yoThengiso
Kuboniswe apha unodoli wesondo we-urdolls ubungakanani obuphakathi kweempundu. Banodoli wesondo ophakathi ukuya ezinqeni ezinkulu ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba ujonge ngesondo ezimpundu, unodoli wenyani we-esile uya kukunika olona lonwabo luvuselela inkanuko. Uninzi lobungakanani bazo buqhelekile. Ayinkulu kakhulu okanye incinci kakhulu. Abathengi abaninzi bafumene oonodoli babo obanelisayo apha. Yiza ubone eyakho!
I-Kamila-Ipenisi enkulu 175CM Uthando lwe-TPE Irontech Dolls
Intloko ye-silicone ye-149cm ye-C-indebe yentlambo, ukutyabeka kolusu kwi-Bezlya Dolls
Unodoli we-esile ophakathi othengiswayo kwi-urdolls
Ngaba ujonge amava ngesondo elide kunye a Unodoli wesondo weempundu ophakathi? Khangela oonodoli be-hip bothando balandelayo, fumana i unodoli we-esile ophakathi owanelisekileyo ngako, cofa ekuthengeni, sithembisa ukukubonelela nge-silicone ekumgangatho ophezulu / tpe isondo unodoli, ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala!
Ngaba uhlala uphupha ngokutyibilika ngocango olungasemva? Kukhethwa ucango olungasemva oluphakathi? Ukuba kunjalo, wethu oonodoli besondo abaphangi abaphakathi zigqibelele kuwe. Unodoli we-Medium butt wothando ngomnye woonodoli abathengiswa kakhulu Iidloli zesini zeBBW, ngakumbi abo bafuna ukuba nomthandi omkhulu we-butt, ngokuthenga unodoli we-Medium hip sex, unokufezekisa iindlela ezahlukeneyo, amava okwenene kunye nokuzonwabisa ngokwesondo, kwendalo kunye nenyaniso!
Kutheni oonodoli be-hip abaphakathi bethandwa ngamadoda?
Ukwenzela i oonodoli abagobileyo abaneesile eliphakathi, ayikho indoda yokwenene enokwala umtsalane wakhe. Ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo ze-TPE ezithambileyo zingenza unodoli we-butt ophakathi ogcwele u-elasticity kwaye akuzisele amava amangalisayo ngesondo.Ungafumana i-tush obusoloko uyiphupha koodoli bethu besini se-butt kodwa ngaphandle kwayo yonke i-hangups yokuthandana kwi- ihlabathi lokwenyani.